Rohingya Students Forum: May 2019
ရိုဟင်ဂျာ ရိုးရာ လူမှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ ပွဲလမ်းသဘင်များတွင် အများတွေ့ရလေ့ရှိသော၊ ဆင်းရဲချမ်းသား မခွဲခြားဘဲ ပြုလုပ်လေ့ရှိသည့် ပွဲတစ်ပွဲကား အလှူပွဲပင်ဖြစ်သည်။ ထိုအလှူပွဲသည် တမလွန်ဘဝ အေးချမ်းသာယာရေး နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရရှိရေးအတွက်သာ အကျိုးကုသိုလ်ကို ရည်ရွယ်လျက် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပေသည်။
ကောင်းမှုကုသိုလ်အဖို့ ရိုဓလေ့ထုံးစံအရ ပြုလုပ်ကျင်းပသော်လည်း အိစ္စလာမ်သာသနာတော်၏ မဖြစ်မနေပြုလုပ်ရသော ဖရစ်တာဝန် ဝတ္တရားတစ်ခု မဟုတ်ကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးလိုပါသည်။
ဖာတီးယားအလှူပွဲသည် အိစ္စလာမ်သာသနာတွင် ဆန်းသစ် တာဝန်ဝတ္တရား တစ်ခု ဖန်တီးလိုက်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ အပေးအကမ်း ထက်သန်သော၊ ရက်ရက်ရောရော လှူဒါန်းတတ်သော ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသားတို့၏ မွန်မြတ်သော စိတ်ဓာတ်ကို ပေါ်လွင်စေခြင်းဖြစ်သည်ဟုသာ ယုံကြည်ရသည်။ အချို့ပညာရှင်အချို့ကမူ အိစ္စလာမ်သာသနာ အဆုံးအမ ပေါင်မဝင် ၊ ဆန်းသစ်ဖန်တီးခြင်း (ဗီဒါဟ်) ဟုသာ ယူဆကာ စောဒက တက်ကြသည်။ အထင်လွှဲ တားမြစ်ကြသည်။
စင်စစ်အားဖြင့် အလှူပွဲသည် ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖို့ ရှေးအစဉ်အလာအရ ပြုလုပ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သာသနာ့ပေါင်တွင် တမင် ထည့်သွင်းပေးနေသည် ဟူသော သံသယမှာ လုံးဝမမှန်ကန်ပါ။ မိမိတို့ အမျိုးသားတို့၏ ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်သည့် ရှေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်း တစ်ခုကို လက်ဆင့်ကမ်း ယူဆောင်လာခြင်းပင် ဖြစ်ပေသည်။
ဤပို့စ်ရေးရခြင်းမှာ ဖာတီယားအလှူပွဲကို ထောက်ခံခြင်း၊ ကန့်ကွက်ခြင်း အလျှင်း မဟုတ်ဘဲ မျိုးစေ့သစ် လူငယ်တို့၏ အမျိုးသားရေး ဗဟုသုတ တိုးပွားကြွယ်ဝစေရန် ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသားတို့၏ ဓလေ့ထုံးစံ တစ်ခုကို ဖော်ပြပေးခြင်း ဆက်ဆက်သာ ဖြစ်ပေသည်။
အလှူပွဲကို ရိုဟင်ဂျာဘာသာစကားတွင် ဖားသီယား ဟုခေါ်သည်။ အာရဗီ ဘာသာစကားမှ ဆင်းသက်လာသော မွေးစား စကားလုံးဖြစ်သည်။ အဓိပ္ပာယ်မှာ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ အစပြုခြင်း၊ နိဒါန်းသွယ်ခြင်း စသည်ဖြင့် ဖြစ်သည်။ ဖားသီးယား အလှူပွဲတွင် ဆင်းရဲသားများအား အစားအသောက် ကျွေးမွေးခြင်း၊ တရားနာပွဲများပြုလုပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်လေ့ရှိကြသည်။
ရိုဟင်ဂျာတို့သည် အချိန်ကာလ နှင့် အဖြစ်အပျက် ဖြစ်ရပ်အပ်ါမူတည်၍ ဖားတီးယားအလှူပွဲ အမျိုးမျိုး ပြုလုပ်ကြသည်။ ဘာသာရေး ရက်ကြီးခါကြီးအလိုက် အလှူပွဲများပြုလုပ်သည့်အပြင် တစ်စုံတစ်ခုသော အကြောင်းအရာအတွက်လည်း အလှူပွဲများ ပြုလုပ်သည့်ဓလေ့ရှိသည်။ အချို့ကို အောက်တွင်ဖော်ပြပေးပါမည်။
ဘာသာရေးရက်ကြီးခါကြီးအလိုက် ပြုလုပ်သည့် ဖတီးယားများမှာ-
အရှူရစ္စာန် ဟုခေါ်သော ရိုပထမလ တွင် မော်ရောမ်ဖားတီယား၊
နော်ဗီစ္စာန် လ တွင် ယိုမန်နော်ဗီဖားတီယား၊
လူရီစ္စာန် လတွင် လူရီဖားတီးယား၊
ရူဇာစ္စာန် လတွင် အာ့တိုက်ဖားသီယား
စသည်ဖြင့် ရက်မြတ်နေ့မြတ်များတွင် အလှူပွဲများပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။
သာမညအလှူပွဲများမှာ ရာသီအလိုက် အသီးအနှံများ အစထွက်လျှင်လည်း ဖားတီးယားများ ပြုလုပ်ကြသည်။ ယာခင်းမှ အဦးဆုံး သီးနှံများ ထွက်လျှင် ထိုသီးနှံနှင့် အလှူပွဲများ ပြုလုပ်၍ ဆင်းရဲသားပြည်သူများအား ကျွေးမွေးဧည့်ခံကြသည်။
အသစ်အစပြုလုပ်သည့် လုပ်ငန်း၊ အိမ်သစ်ပြောင်းခြင်း၊ အိမ်သစ် ဆောက်ခြင်း၊ ဆိုင်သစ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းသစ် အစပြုခြင်း စသည်တို့ အတွက်လည်း အလှူပွဲများ ပြုလုပ်ကြသည်။
တောင်တက်သမားများ တောင်တက်သည့်အခါ၊ ခရီးလွန်ထွက်သည့်အခါ၊ ခရီးမှ ပြန်ရောက်သည့်အခါ ဖာတီယားများပြုလုပ်ကြသည်။ တောက်တက်သမားများ အိမ်ပြန်ရောက်လာသောအခါ စုပေါင်းဖာတီးယားပွဲပြုလုပ်ကြသည်။
တစ်စုံတစ်ယောက် ဆုံးပါးကွယ်လွန်လျှင် ၎င်းသူအား ရည်စူး၍ ဖားတီးယား အလှူပွဲများအဆင့်ဆင့် ပြုလုပ်ကြသည်။ (၄) ရက်မြောက် ဖားတီးယား၊ (၄၀) ရက်မြောက် ဖားတီးယား၊ တစ်နှစ်ပြည့်ဖားတီးယား စသည်ဖြင့် ပြုလုပ်ကာ ကွယ်လွန်သူအတွက် အကျိုးစူဝါပ် မေတ္တာပို့ပေးကြသည်။
အချို့က တစ်စုံတစ်ခုသော ဘေးအန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင်နေချိန်တွင် လွှတ်လျှင် အလှူပွဲများ ပြုလုပ်မည်ဟု ရည်စူးကြသည်။ သားကောင်းသမီးကောင်း ရတနာ ထွန်းကာလျှင် အလှူပွဲလုပ်ဟု ရည်စူးကြသည်။ ရောဂါခံစားနေသာ မိသားစုဝင် အတွက်လည်း ရောဂါသက်သာလာစေရန် အလှူပွဲများပြုလုပ်ပေးကြသည်။
အလှူပွဲတွင် အဓိကအစားအစာအဖြစ် ရိုရိုးရာမုန့် ဖြစ်သော လူရီဖီရာ့နှင့် ဆန္ဒီး ကို ကျွေးမွေးဧည့်ခံကြသည်။ သောကြာနေ့ ပလီကျောင်းတွင် ဆီန္ဒီ ရိုထမနဲလည်း ကျွေးမွေး အလှူပြုကြသည်။ အခြားအစားအစာများလည်း ကျွေးမွေးကြသည်။ စဦးထွက် သီးနှံနှင့် အလှူပွဲ ပြုလုပ်ကြလျှင် ထိုသီးနှံများကို ဧည့်ခံကျွေးမွေး လှူဒါန်းကြသည်။ အရူရစ္စာန်တွင် ပြုလုပ်သော အလှူပွဲတွင် ဟောတ္တောရ်ဒါနာဘာသ် ခေါ် စေ့မျိုး ၇၀ ပါသော ပြောင်းထမင်းတစ်မျိုးကို ထူးထူးခြားခြား ပြုလုပ်ကျွေးမွေးကြသည်။
ဖားတီးယား အလှူပွဲတွင် ဘာသာရေး အထွတ်အမြတ် ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ သက်ကြီးအိုကြီးများ၊ ရပ်လူကြီးများ၊ ဆွေကြီးမျိုးကြီးများ၊ ဆင်းရဲသားပြည်သူများ စသည်ဖြင့် ဖိတ်ခေါ်ကြသည်။ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကို သရွတ်ဇယ် (ဟသမ် အေ ကုရ်အာန်) ကြသည်။ တရားနာပွဲလည်း ပြုလုပ်ကြသည်။ တရားနာပွဲကို များသောအားဖြင့် လသာသော ညအချိန်တွင် ကျင်းပကြသည်။ တရားနာပွဲ ပြီးဆုံးလျှင် စန္ဒီး၊ ဖျော်ရည် စသည်ဖြင့် ကျွေးမွေးဧည့်ခံသည်။ လိုအင်ဆန္ဒ ပြည့်ဝစေရေး စုပေါင်း ဆုတောင်းကြသည်။
ဤသို့ဖြင့် ရက်ရောလှူဒါန်းခြင်း၊ သဒ္ဓါတရား ထက်သန်သော ရိုဟင်ဂျာတို့သည် ကိစ္စတိုင်းကို အကြောင်းပြု၍ ဆင်းရဲသား ပြည်သူတို့အား လှူဒါန်းကျွေးမွေးကြသည်။ ဤသည်မှာ ရိုဟင်ဂျာ အအမျိုးသားတို့၏ မမွန်မြတ်သော စိတ်စေတနာပင်ဖြစ်ပေသည်။ ရိုဟင်ဂျာ ဓလေ့ထုံးစံ၊ ယဉ်ကျေးမှုများကို မကွယ်မပျောက်အောင် ဝိုင်းဝန်း ထိန်းသိမ်းကြရမည့် တာဝန်မှာ ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသားတိုင်း၏ တာဝန်ပင်ဖြစ်ပေသတည်း။
Posted by Rohang king at 3:37 PM
Labels: ရိုးရာ, သုတ, ဆောင်းပါး
မျိုးဆက် သုံးဆက် ဖြတ်သန်းခဲ့သော ခေတ်သုံးခေတ်
သင်ပုန်းကြီးဖတ်စာ ကဗျာလေးများ ။ ။
န-နဖားမှာ ကြိုးလျှို ပါ
အ-အမှာ လူ အအ
ည-ညအခါ လ သာသာ
(ဆရာ တက္ကသိုလ် မောင်မောင်ကြီး)
ဖ-ဖရုံယို အလွန်ချို
ဟ-ဟ ဟာ ဟ ရယ်လိုက်ရ
Credit. to original. Uploader
Labels: poem, ပညာရေး, သုတ
ကျေးလက်၌ ငယ်ဘဝကို ဖြတ်သန်းရတာကလည်း တမူထူးခြားလှပါတကား။ ကျေးလက်ပုံပြင်၊ ရိုးရာ၊ အားကစားတွေက လူငယ်တွေရဲ့ အဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့ ပျော်ပါးမြူထူး အရွယ်ကလေးကို လန်းဆန်းစေပါတယ်။ အနာဂတ်ဘဝ ထူထောင်ရာ အားဖြည့်စေပါတယ်။ ဘဝတစ်သက်သာလုံးအတွက် အာဟာရ သဖွယ် ဖြစ်တဲ့ အဲ့ဒီအချိန်ကာလကို တစ်ကိုယ်တော်ထီးကျန် နေတဲ့ခါ တစိမ့်စိမ့် တွေးရင် မျက်နှာငွေလ ဝင်းပပနဲ့ ဟိုခေတ်သို့ တခေါက်ပြန်လှည့်ချင်တဲ့ခါ ပြန်လိုချင်တဲ့ တွေးမဝတဲ့ ပီတိကို ခံစားစေရပါတယ်။
ယနေ့လောက် မဖွံ့ဖြိုးခဲ့သော ခေတ်တခေတ်လည်း တို့တွေ ဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးသည်။ ထိုခေတ်က ခေတ်မီ အီလက်ထရွန်နစ် ပစ္စည်းများ ရုပ်မြင်သံကြား၊ မိုဘိုင်းဖုန်း၊ ဗီဒီယိုဂိမ်း စသည်တို့ မရှိခဲ့ချေ။ ထိုခေတ်က လူကြီးတွေ၊ ကလေးတွေ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ရှည်လျားသော ညည့်နက်ကို ကုန်ဆုံးစေသလဲ။ ဒါက ယနေ့ခေတ် လူငယ်တွေရဲ့ သိလိုစိတ် မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။
ရှေးခေတ်က လူတွေဟာ သက်ဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်အလိုက်၊ လူမျိုးဓလေ့ထုံးစံအလိုက် ညည့်အခါကျရင် ပုံပြင်တွေပြော၊ ဒဏ္ဍာရီတွေဖတ်၊ မြေဝိုင်းကပွဲတွေနဲ့ ဖျော်၊ စကားထာ ထိုးပွဲတွေလုပ် စတဲ့ ကစားနည်း အမျိုးမျိုးဖြင့် တိတ်ဆိတ်နေသောညကို ပွဲသဘင်ကဲ့သို့ ပျော်မြူးကြတယ်။ အဲ့လို ဂိမ်းတွေမှာ အိမ်တွင်း ကစားတဲ့ ဂိမ်းနဲ့ ကွင်းပြင်ထွက် ကစားရတဲ့ ဂိမ်း ဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ဒီမှာ အိမ်တွင်းကစားတဲ့ ကစားနည်း အချို့ကိုပဲ ဆွေးနွေး တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ဟာကို နောက်ကဏ္ဍတွေမှာ ဆွေးနွေးပေးပါမယ်။
“Cíyalor dhor nái bagór dhor, guithguitha zunaffoor.”
ဤလင်္ကာကား လသာသော ညတွင် ကြားရလေ့ရှိတဲ့ နိုးဆော်သံတစ်သံဖြစ်တယ်။ ကလေးတွေ ကစားဖို့ ထွက်ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်သံဖြစ်တယ်။ “မြေခွေး၊ ကျားတို့ကို တစို့တစိမှ ကြောက်စရာမလိုပါ၊ အကြောင်းမှာ လသည် ကောင်းကင်ပေါ် အလွန်ပင် တောက်ပနေတယ်။ ထွက်လာကြစို့…ကလေးတို့ရေ။”
ပုံပြင်ဖတ်ခြင်း ပြီးဆုံးတဲ့အခါလည်း လင်္ကာချိုးပြီး ပွဲပြီးစေတယ်။
“Ek ceer nun, Kissá fún,
Ek ceer morís, Kissá dóris,
Ek ceér tel, Kissá gel.”
၁။ ရော်ခ်ျဟောခ်ျ ကားလား
၂။ ဘာဂ်ကုမ် ကားလား
၃။ ဩနီဘိုင်ယောရ် ထော်နီ ကားလား
၆။ မော်လ် ကေလား
၇။ ဘာလ်တီ ကားလား
၉။ ဆော်ဒီ ကိစ္စာ့
၁။ ရော်ခ်ျဟော်ခ်ျ ကားလား
ရော်ခ်ျဟော်ခ်ျ ကားလား သည် ညအခါ အိမ်တွင်း ကစားသော ကစားနည်း တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ငယ်ရွယ်သော ယောက်ျား၊ မိန်းကလေးမရွေး ပေါင်းပြီး ကစားနိုင်သည်။ လသာသော ညများတွင် သာမက လကွယ်ညများတွင်လည်း ကစားနိုင်သည်။ အများဆုံးတော့ အိမ်တွင်း ကစားကြသည်။ အိမ်ရှိ ညီကိုမောင်နှမများပေါင်းပြီး ကစားမြူးထူးကြသည်။
ကစားနည်းက သိပ်လွယ်ပါတယ်။ အဓိက ရေတွက်ရမယ့် နံမယ် ခြောက်ခုကို တတ်ထားရသည်။ အဲ့ဒီ နံမယ် ခြောက်ခု ရတာနဲ့ ကစားတတ်ပြီ။ နံမယ်များမှာ-
၁။ ရောခ်ျ [Roic]
၂။ ဟောခ်ျ [Hoic]
၃။ သျှိင်္ဂေါ [Cíñgo]
၄။ ဘုလ်ဘူလီ [Bulbili]
၅။ မာလေခ် [Malek]
၆။ မုစ်တာခ် [Mustaq] တို့ဖြစ်ကြတယ်။
ကစားဖော် ဘယ်နှယောက် မဆို တစ်ပေါင်းတစ်ခါတည်း ကစားနိုင်တယ်။ ကစားနည်းရဲ့ အဓိက အချက်က မှန်းရာပေါက်ခြင်း ဖြစ်တယ်။ ဦးစွာ ကစားဖော် အားလုံးက လက်နှစ်ဖက်ကို လက်ချောင်းတွေပြန့်ကာ ကြမ်းပေါ်တွင် ချထားရတယ်။ ပြီးတော့ တစ်ယောက်စီ မှန်းထားရာကို ခေါ်ပေးရတယ်။ ဥပမာ-တစ်ယောက်က ROIC ပေါက်မယ် မှန်းပြီး Roic လို့ခေါ်ရတယ်။ တစ်ဦးစီရဲ့ ခေါ်ချက်တွေကို ကိုယ်စီကိုယ်စီ မှတ်ထားရတယ်။ ပြီးရင် လက်တွေ ပြန်တင်ယူပြီးတော့ မိမိခေါ်ထားတဲ့ နံမယ်နဲ့ ထိအောင် ခန့်မှန်းပြီး လက်ချောင်းတွေ ပြန်ကြမ်းပေါ် ချထားရတယ်။ (တစ်ယောက်က ၁ ချောင်း၊ နောက်တယောက်က ကိုးချောင်း၊ နောက်တစ်ယောက်က5ချောင်း စသည်ဖြင့် မိမိခန့်မှန်းတာနဲ့ ကိုက်အောင် ချတာပေါ့) ကြမ်းပေါ်ချထားတဲ့ လက်ကို ပြန်တင်ယူလို့မရဘူး။ ကြမ်းပေါ်မထိခင် ဆိုရင် တင်ပြီး ပြန် လက်ချောင်း အနည်းအများပြောင်းပြီးတော့ ချနိုင်တယ်။ အားလုံး ချပြီးသွားရင် တစ်ယောက်က လက်ချောင်းတွေ အားလုံးကို အစဉ်အလိုက် ရေတွက်တယ်။ တစ်၊ နှစ်၊ သုံး၊လေး ဆိုပြီး ရေတွက်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ ဟိုး ရောခ်ျ၊ ဟောခ်ျ၊ ချီင်္ဂေါ၊ ဘုလ်ဘူလီ၊ မာလေခ်၊ မုစ်တာခ် ဆိုပြီး ရေတွက်နည်းနဲ့ ရေတွက်တာဖြစ်တယ်။ လက်ချောင်း ခြောက်ချောင်းထက်များရင် မုစ်တာခ် ပြီးရင် ပြန်အစ ရောခ်ျကနေ ရေတွက်တယ်။ နောက်ဆုံး လက်ချောင်း ကို ရေတွက်သော နံမယ်သည် ပေါက်တဲ့ နံမယ်ဖြစ်တယ်။ နောက်ဆုံး လက်ချောင်းထိ ရောက်တဲ့အခါ ဟောခ်ျနဲ့ ဆုံးတယ် ဆိုပါစို့၊ အစက ဟေခ်ျ မှန်းခေါ်ခဲ့တဲ့ သူကနိုင်သွားပြီပေါ့……ဟား…ဟား
နိုင်တဲ့သူက ဘာလုပ်မယ် ဆိုတာကို ကစားနည်းမစမီ ညီတူညီမျှ ဆုံးဖြတ်ရတယ်။ တစ်ချိန်းစီ ခေါင်းကိုတုမယ် သို့မဟုတ် လက်ဝါးကို လက်သန်း ကြမ်းထိပြီး အထက်သို့ လက်မမြောက်ပြန့်ကာ သတ်မယ်။ ဒုတိယနည်းကို နှစ်ယောက်တမ်း ကစားတာမှာ အသုံးများတယ်။ လက်ဝါးကို ခံသူက ရိုက်ချိန်မှာ အပေါ်သို့ မြင့်လိုက်ရင် ရိုက်ချက် လွှဲသွားနိုင်တယ်။ ရိုက်ချက်လွှဲသွားရင် ဆက်မရိုက်နိုင်တော့ဘူး။ ကစားနည်းကို ပြန်စရတယ်။ ဒီတစ်ခါ နိုင်တဲ့သူက သူ့လက်ချောင်းကနေစပြီး ဦးဆောင်ရေတွက်မှာဖြစ်တယ်။ အထက်နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ကစားတယ်။ မှန်းရာပေါက်တဲ့သူ နိုင်တယ်၊ ရှုံးတဲ့သူ ခံပေါ့…ဒီလိုနဲ့ ညကို နွေးနွေးထွေးထွေး ကုန်ဆုံးစေပါတယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင် ရှေးခေတ်က ကစားနည်းတစ်ခုကို တတ်သွားပြီ ထင်တယ်။ အိမ်မှာ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေနဲ့အတူ ကစားကြည့်ပေါ့။ ပျော်စရာလား သိရမယ်၊ ရှေးခေတ်က ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခု ကိုယ်တိုင်ခံစားနိုင်မယ်။ ကစားကြရအောင်…
၂။ ဘာဂ်ကုမ် ကားလား [Bákkum Kalá]
ဤ ကစားနည်းသည်လည်းပဲ ညအခါ ကစားသော ကစားနည်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ ရော်ခ်ျဟော်ခ်ျ ကစားနည်းနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင် တူပါတယ်။ အများအားဖြင့် အိမ်တွင်း ကစားကြတယ်။ ညည့်အခါမက နေ့အခါ အားလပ်တဲ့ အချိန်တွေမှာလည်း ကစားကြတာကို တွေ့ရတယ်။
ကစားနည်းရဲ့ အဓိက သော့ချက်က လင်္ကာ တစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီလင်္ကာကို ရေတွက် ကစားရတယ်။ လင်္ကာမှာ-
Bakkúm bakkúm kiáñraMuicé báiñggé thiañra.
Muic maittou gilám dé,Keça fúçi moillám dé.
Bóuzi re bóuzi suñra duf,Suñrat kiállá dán, sulot dóri an.
Sul ká hala, Nak haçi féla .Nak ot ká lou, Borbái ór buo.
Borbái borbái gozzon tole,Cóñço bái cóñço bái tetói gasór tole.
Tetói faittou gilám dé,Áffesótor dóijje dé.
Elóm fath, delóm fath,Haçi féla cúnar hát.
လင်္ကာ ပါဒ တစ်ခုစီကို လက်တစ်ချာင်းစီထိကာ ရေတွက်ရတယ်။ ကစားဖော်အားလုံးက လက်နှစ်ဖက်စီ ကြမ်းပြင်ပေါ်ချရတယ်ပေါ့။ ကစားဖော် (၂)ယောက်မက တပေါင်းတည်း ကစားနိုင်တယ်။
ကစားဖော်များသည် ကြမ်းပြင်တွင် ဝိုင်းရံဝိုင်းဖွဲ့ ထိုင်ကြတယ်။ အစတွင် Borsáb တစ်ယောက် ရွေးရတယ်။ သူငယ်ချင်း အားလုံးက လက်နှစ်ဖက် စလုံးကို ကြမ်းပြင်ပေါ်ချထားရတယ်။ ပြီးတော့ ဘောရ်ဆာပ် ဖြစ်သူက အထက်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ လင်္ကာကို တစ်ပါဒစီ ဆိုရင်း လက်ဝါးတစ်ခုစီ လက်ဆုပ်ထောင်နဲ့ အသာလေး ထိရတယ်။ ခပ်မာမာထိလိုက်ရင် နာမှာစိုးလို့။ အဲ့လို ရွတ်ရင်းထိရင်းနဲ့ လက်တွေ ကုန်သွားပြီ၊ လင်္ကာပုဒ်က မကုန်သေးဘူးဆိုရင် ကျန်နေတဲ့ လင်္ကာပါဒတွေကို ပထမလက်က ပြန်ရွတ်ထိရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ လင်္ကာတစ်ပုဒ်လုံး ကုန်သွားပြီးဆိုရင် လင်္ကာနောက်ဆုံး ပါဒ ထိတဲ့ လက်ဟာ သိမ်းဆည်းခံလိုက်ရမယ့် လက်ဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ လက်တစ်လက် လျော့သွားပြီပေါ့။ နောက်တစ်ခါ ပြန်စရတယ်။ နောက်ဆုံး ထိတဲ့လက်ကို သိမ်းလိုက်… ဒီလိုနဲ့ ကစားရင်း လက်တွေ ကုန်သွားတဲ့အထိ ကစားရတယ်။ နောက်ဆုံး လက်တစ်လက် ကျန်တဲ့သူက ဗိုလ်ဖြစ်နေပြီပေါ့။
ဒုတိယ ကျော့အနေနဲ့ မေးဖြေ ကစားရတယ်။ ဗိုလ်ကျတဲ့သူက ကျန်တဲ့သူတွေထံ မေးရမှာဖြစ်တယ်။
မေး- Tor hát hone loigiyé?
မေး- Bilaiye toré kidiyé?
ဖြေ- Hóñlá Múla.
မေး- Hóñla Múla haré diyós?
ဖြေ- Tor natiré.
ဒီကစားနည်းကလည်း အထက်က ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ကစားနည်းတွေရဲ့ အုပ်စုလို့ပဲ သတ်မှတ်နိုင်တယ်။ လင်္ကာရွတ် ကစားရတဲ့ ကစားနည်းဖြစ်တယ်။ ကစားပုံကစားနည်းကတော့ နည်းနည်းခြားတယ်။ ဖွက်ထားတဲ့ ပစ္စည်းလေး တစ်ခုကို ရှာဖွေနည်းဖြစ်တယ်။ ကစားဖော် နှစ်ယောက်မက ကစားနိုင်တယ်။ ကစားဖော်များလေ ပိုကောင်းလေပေါ့။ ၁၀ ယောက်ထက် များရင်တော့ ရှုပ်ကုန်မယ်။ ပါးစပ်က ရွက်ရမယ့် လင်္ကာမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်တယ်။
Oní báiyór thooni,
Árgua gásor boiro ni,
Áre hawwá áré zaa,
Maár hawwá dud bát ha,
Aaré hawwa, leikká fuissá
Harttú asé harttú nái
Hoói félla hawwar maa.
ဒီလင်္ကာကို အဓိက တတ်ထားရမယ်။ ကဲ့… ကစားနည်း သင်ပေးမယ်!
ပထမဦးဆုံး Hawwa တစ်ယောက်ရွေးရတယ်။ Hawwa ဆိုသူက ဖွက်ထားတဲ့ဟာကို ရှာပေးမယ့် သူဖြစ်တယ်။ ကစားပွဲ မစခင်တော့ ခေါင်းပန်းလှန် ရွေးတယ်။ ပြီးရင် ကစားဖော်တွေက လက်ကို ကိုယ်စီကိုယ်စီ ကိုယ်နဲ့ကပ် ဖိထားရတယ်။ တစ်ယောက်က ဖွက်မယ့် တုတ်တိုတုတ်စ သို့မဟုတ် အခြားတစ်ခုခုကို လက်ဆုပ်ထဲ မမြင်ရအောင် ကိုင်ပြီး ကစားဖော်တွေရဲ့ လက်ထဲကို နှိုက်ပေးရတယ်။ နှိုက်ပေးတဲ့အခါ ပါးစပ်က အထက်လင်္ကာကို ရွတ်ရတယ်။ လင်္ကာ မဆုံးခင် တုတ်တိုတုတ်စကို ကစားဖော် တစ်ယောက်ယောက်၏ လက်ထဲမှာ ပြောင်းဖွက်ထားရတယ်။ ဟာဝါ လုပ်သူက သူတို့ ကစားနေတာကို သေသေချာချာ စောင့်ကြည့်နေရတယ်။ လင်္ကာဆုံးတာနဲ့ ဟာဝါက ရှာပေးရမယ့် အချိန်တန်ပြီ။ သူက ကစားခဲ့တဲ့ အမှုအရာကို ချင့်တွက်ပြီး ကစားနေတဲ့သူတွေထဲမှ တုတ်တိုစ ရှိမယ်လို့ ယူဆတဲ့သူကို ထောက်ပြပေးရတယ်။ သူထောက်ပြတဲ့ သူထံ တုတ်တိုစ ရှာတွေ့ရင် နိုင်သွားပြီ။ ဒီတစ်ခါ ဟာဝါလုပ်သူက ကစားရမယ်။ အဖမ်းခံရသူက ဟာဝါလုပ်ရမယ်။ ဒီအတိုင်း ဖွက်ရှာပြီး ကစားရင် ညကလေးကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ကုန်ဆုံးကြတာပေါ့။
၄။ အေခ်ဆုဝါရီ ကားလား
Cú gula haitum,
Ek gas ouk.
မောရီဆ်ကစားနည်းကို ရေ၌ ကစားရသော ကစားနည်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ ကလေးတစ်ယောက်ကို အခြားကလေးတွေက လိုက်ဖမ်းရတဲ့နည်းဖြစ်တယ်။
Iba ki moris, Ekku dufe doríc.
ကျေးလက် ဆိုတာနဲ့ အညာဒေသ တောတောင် ပတ်ကုံး ဝန်းရံနေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်တယ်။ အိုင်းချင်း ကဗျာတွေမှာ အလွန်ကို ရှေးတောရွာတို့ သိမြင်ခံစားနိုင်တယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်အလျှောက် သူတို့ရဲ့ ငယ်ရွယ်ဘဝဟာလည်း
Posted by Rohang king at 3:25 PM
Labels: ရိုးရာ, sports
Prince Qajar (သို့မဟုတ်) အလှတရားရဲ့ နိယာမကို တော်လှန်ခဲ့သူ
သက္ကရာဇ်​ ၁၉၀၀ ဝန်းကျင်​က ပါရှားပြည်​မှာ ထင်​ရှားခဲ့တဲ့ ​တော်​ဝင်​မင်းသမီး Zahra Khanum ဖြစ်တယ်။
သူမရဲ့နာမည်အရင်းက ​ Taj Al Saltaneh Qajar (1884-1936)၊ မင်းဆက်​ Naser Al Din Shah Qajar ရဲ့ သမီး​​တော် Princess Qajar လို့လည်း​ခေါ်ကြတယ်​။ သူမရဲ့ ငြင်းဆိုမှုကြောင့် အမျိုးကောင်းသား တော်ဝင်လူငယ် ၁၃ ယောက် အသည်းကွဲပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆုံး စီရင် ခဲ့ပါတယ်။
Princess Qajar (သို့မဟုတ်) အလှတရားရဲ့နိယာမကိုတော်လှန်ခဲ့သူ
သူဟာ အီရန်နိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူဖြစ်သလို ပန်းချီ စာပေစတဲ့နေရာမှာလည်း အင်မတန် ထူးချွန်ပါတယ်။ ခေတ်ပညာတတ် အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ပြီး သူမရဲ့အိမ်မှာတစ်ပတ်ကို တစ်ခါ စာပေဆွေးနွေးပွဲ လုပ်ပီး နိုင်ငံရေးနဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးစတာတွေကို နှီးနှောဖလှယ်တယ်။ ပြောရရင် သူ့ခေတ်သူ့အခါက အတိုင်းထက်လွန်ေ​​​တ်ာတဲ့ ပညာတတ်အမျိုးသမီးတယောက်ပေါ့။
ဘာသာရေးရိုးရာ အစဉ်အလာအရ ဝတ်ဆင်ရတဲ့ Hijab ကို စွန့်ပီး အနောက်တိုင်းဝတ်စုံကို ရဲရဲကြီး စတင်ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးအာရပ်အမျိုးသမီး တစ်ဦးဖြစ်တယ်။ သူ့ရဲ့အကြောင်းကို လက်ရှိမှာ အီရန်ရဲ့ မြို့တော် တီဟီရန် တက္ကသိုလ်ကနေ ဟားဗတ်အထိ သင်ရိုးထဲမှာ သင်ရပါတယ်။
ဓာတ်ပုံရိုက်တာ ဝါသနာပါတယ်။ ကဗျာတွေကောင်းကောင်းဖွဲ့တတ်သလို စာအုပ်တွေလည်း ထုတ်တယ်။
ထိုခေတ်ကအီရန်ပြည်ရဲ့ မြေအောက် အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတောင်းဆိုတဲ့အဖွဲ့ကို စတင် တည်ထောင်တာ လည်း သူပဲဖြစ်တယ်။
အရည်အချင်းရှိတဲ့သူမဟာ ထိုခေတ်က အီရန်(ပါရှား)ပြည်ရဲ့အလှဆုံး အမျိုးသမီးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသလို ယောက်ျားတွေရဲ့ပေါ်ပြူလာဖြစ်ခံရဆုံး အမျိုးသမီးလည်းဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ အလှအပအကြောင်းကို ယောက်ျားတွေဟာ ကဗျာတွေသီ သီချင်းတွေပါဖွဲ့ဆိုကြပါတယ်။
Qajar မင်းသမီးဟာ အမျိုးသားပေါင်း ၁၀၀ကျော်ရဲ့ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခံခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီး သူငြင်းပယ်ခဲ့တဲ့ အထဲက ၁၃ယောက်ဟာ သူ့အချစ်ကို မရလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင်သေကြောင်းကြံခဲ့ပါတယ်။
တကယ်တော့ မင်းသမီး Qajar ဟာ ပုံမှန်အမြင်အရဆို အရပ်ပုပုနဲ့ဝဝဖိုင့်ဖိုင့် အမျိုးသမီးတယောက်ပါ။ ဒါ့အပြင် မျက်နှာကလည်း အမျိုးသမီးမဆန်ပဲနှုတ်ခမ်းမွေးရေးရေးနဲ့ ပုံမှန်လူတွေရဲ့ အလှတရားဆိုတဲ့ "စံ"နဲ့ယှဉ်ရင် ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။
ထိုခေတ်က ပါရှားပြည်က လူတွေရဲ့ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုဟာ အရမ်းကောင်းတယ်။ ပညာတတ်တွေလည်း ပေါများတယ်။ Qajar မင်းသမီးရဲ့အဖေ ဘုရင်ကြီး Naser Al Din ဟာ မိန်းမချောလေးများကို အလွန်နှစ်သက်ပါတယ်။ တနေ့မှာ သူမေးခွန်းတခုကို စဉ်းစားမိခဲ့ပါတယ်။
A painting of ‘Esmat (painter unknown) in
the Bahman Bayani Collection. Courtesy
"မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ အလှတရားဆိုတာ ဘာလဲ"တဲ့။
တကယ်ချောမောပီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မိန်းကလေးဆိုတာ ပိန်ရမယ်၊ မဝရဘူး၊ အသားအရေလေးက ကြည်ပီးဖွေးဖွေးလေးနဲ့ ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ လူတွေရဲ့အမြင်ကို ဘုရင်ကြီးအနေနဲ့ လက်မခံချင်တော့ဘူး။ သူဟာနေ့တိုင်း မိန်းမချောလေးတွေနဲ့ ထိတွေ့မြင်နေရတာပဲ။ သူ့အတွက်ဘာမှ မဆန်းဘူး။
တဖြည်းဖြည်း သူနားလည်လာတယ်။ လူတွေနားလည်ထားတဲ့ မိန်းမတယောက်ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ အလှတရားဆိုတာ ရုပ်ရည်ပေါ် မူတည်တယ်ဆိုတဲ့ခေတ်ဟောင်းက အယူတွေကို သူမြေလှန်ဖို့ ကြိုးစားတယ်။ ဘုရင်ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ အယူအဆကို ပါရှားပြည်ရဲ့ပညာတတ် အသိုင်းအဝိုင်းက လက်ခံတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ တိုင်းပြည်တခုလုံးက လက်ခံလာတယ်ဆိုပါတော့။
၁၉၀၀ခုနစ်ကျော်ဦးပိုင်းကာလ ပါရှားပြည်က မိန်းမတယောက်ရဲ့ အလှတရားအပေါ်ခံယူတဲ့ သဘောထားဟာ အဲ့လိုကိုပြောင်းသွားတာပါ။
ဒီလိုအချိန်မှာ Qajar မင်းသမီးလို အမျိုးသမီးတွေအတွက် တန်းတူအခွင့်အရေးကိုတောင်းဆိုရဲတဲ့ ပညာတတ် အမျိုးသမီးထွက်လာတယ်။ ခေါင်းဆောင်စိတ်ရှိပြီး အရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့ သူမကို လိုချင်တဲ့ယောက်ျားတွေ ဝိုင်းဝိုင်းလည်လာတာ ဆန်းတော့မဆန်းဘူး။
ဤသို့ဖြင့် Qajar မင်းသမီးဟာ ယောက်ျားတိုင်းရဲ့ လိုချင်ရတဲ့ မိန်းမသားတယောက်ဖြစ်လာတာပေါ့။
သင့်​အနေနဲ့ သူများလှတယ်ဆိုတိုင်း လိုက်ကြိုက်ဖို့မလိုဘူး။ သူများလှတိုင်း သူ့လို လိုက်လှဖို့လည်း မလိုဘူး။
သင့်​မှာလည်း ကိုယ်ပိုင်အလှတရား ဆိုတာရှိတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရည်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့
အခြား လူတယောက်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ခွင့်ကို သင်​ခံယူနေစရာ မလိုပါဘူး။
အလှတရားဆိုတာ ပြင်ပရုပ်ရည်ပေါ်မှာပဲရှိနေတာမှ မဟုတ်တာ။ သင့်​ရဲ့အကျင့်သိက္ခာ စိတ်ဓာတ် အရည်အချင်း ဒါတွေက ရုပ်ရည်အသွင်အပြင်ထက်ပိုတဲ့ တကယ့် အလှတရားဖြစ်ပါတယ်။
သင်​ဘယ်လို ဝတ်တယ်စားတယ်၊ ဒါတွေက အဓိက မကျပါဘူး။ အဓိကက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ရှိနေဖို့ပါပဲ။
အလှတရားဟာ စစ်မှန်တဲ့ အရည်အချင်း မဟုတ်ပါဘူး။ အရည်အချင်းကတော့ စစ်မှန်တဲ့ အလှတရား တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Qajar မင်းသမီးဟာ ဒီ့အတွက် အကောင်းဆုံး သက်သေပြခဲ့ပီးပါပြီ။ သူလှသလို လိုက်လှနိုင်ဖို့ သင့်​မှာ အရည်အချင်းတွေ အများကြီးလိုပါလိမ့်မယ်။
မိန်းမတစ်​​ယောက်​ရဲ့ အလှဆိုတာ .. အဆင်းမဟုတ်​ပဲ အချင်းဆိုတာ သက်​​သေပြသွားတဲ့ သူတစ်​​ယောက်​ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
Posted by Rohang king at 3:13 PM
Labels: History, well-known, သုတ, နိုင်ငံတကာ
Yián ki zindegi sinta bóra,
Honó taim nái tíyai sai bállá.
Goru soól ór dóil gastalar nise,
honó taim nái tíyai saité.
Bonortú añárá fári zaite,
Sulhaça luwar kér dhuwar nise.
Dinor fooré sóra sonke,
Tarar doillá raitot mazé.
Honó taim nái tiyái saité.
Cúndor maiyyá áñça saité,
Tar téñg hondilla nase.
Tar fudki háñcá sugór tú niyoli
Honó taim nái soiñ goitté.
E zindegi yián oibóu gorib fáçá,
Zodi oilé sinta bóra.
Añárattú honó taim no táilé tíyai saibóllá.
Hót: William Henry Davis ór “Leisure” Ceér or kullumkala torjuma.